Khuphela kwaye ufake iVenkile yokudlala i-4.0.25 | I-Androidsis
Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka njani inguqulelo entsha yeVenkile yokuDlala eyi-4.0.25
Kulo ividiyo elandelayo Ndibafundisa ukukhuphela kunye nokufaka uhlobo olutsha kwivenkile yesicelo se Android, i Dlala iVenkile 4.0.25 isebenze kwizixhobo ezisebenzisa iinguqulelo ezilinganayo okanye ezinkulu kune Froyo o Android 2.2.
Kwividiyo ungabona Ndiyifaka njani kwifayile ye- LG Optimus 3D ku sebenza Android 4.0.4 Isandwich yeCream Cream, kwaye kude lee noko bekucingelwa ekuqaleni, usetyenziso lubonakala lundisindisile kwaye luhlaziyeke ngokupheleleyo ukusebenza kunye noyilo olwenza ukusetyenziswa kunye nokuhamba ngokwamacandelo ahlukeneyo kube mnandi.
Gcina ukhumbula ukuba ukuze ufake ifayile Dlala iVenkile 4.0.25, kufuneka senze ibhokisi yokukhangela yamkele ukufakwa kwezicelo ukusuka Imvelaphi engaziwayo, Olu khetho lunokufumaneka kwiindawo ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kuhlobo lwe-Android esiyisebenzisayo.
En Froyo o Gingerbread siya kuyifumana kwi Useto / iiApplicationNgelixa kwiinguqulelo eziphezulu ze-Android singayifumana kwi Useto / ukhuseleko.
Nje ukuba ibhokisi yokukhangela ihlolwe kwaye Ukhuphele usetyenziso kwimemori yangaphakathi yesixhobo sethu, kuya kufuneka singene kuphela kwindlela apho siyigcine ngayo nayiphi na Isikhangeli seFayile kwaye ucofe kuyo ukuze uyiqhube.
Siza kufumana umyalezo othi siza kuthabatha indawo yenkqubo yesicelo ekufuneka siphendule ukuba siyayamkela kwaye siyayifaka ingxelo entsha Dlala iVenkile 4.0.25.
Njengoko ubona kwividiyo eqhotyoshelweyo, usetyenziso lusebenza ngokupheleleyo kwaye ayinalo naluphi na uhlobo lwe-bug okanye ukungasebenzi kakuhle, nangaphezulu, kwividiyo uqobo sifake isicelo ukuze ubone ukungqinelana kwayo ngokupheleleyo.
Ndiyithandile le nguqulo intsha kunye nayo amava amnandi Zombini Ukuthetha ngokutyibilikayo y ukusebenza njengakwicandelo lokulungiselela kunye nokukhangela usetyenziso, imidlalo, iimuvi, umculo okanye iincwadi.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nale nguqulo intsha, unokufunda inqaku elilandelayo ipapashwe kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwi I-Androidsis.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ungasonyusa njani isantya seprosesa yethu, Uyenza njani imemori ye-RAM kwizixhobo ze-Android, Ukudlala kukaGoogle kuhlaziywa ngonxibelelwano olutsha
Khuphela - Dlala iVenkile 4.0.25
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka njani inguqulelo entsha yeVenkile yokuDlala eyi-4.0.25
usebenzela i-samsung galaxy S
Sele ndiyifakile kumthala wam we-samsung ngaphandle kwengxaki ngokugqibeleleyo
UJose Ibáñez sitsho
masiyifake ukuze sibone ukuba ihamba njani. Enkosi ngolwazi. 😀
Phendula kuJosé Ibáñez
Isebenza kuzo zonke iimodeli ezinkulu okanye ezilinganayo kwiFroyo Android 2.2 +
Ndinengxaki kwiselfowuni yam, ndiyikhuphile ivenkile yam yokudlala kuba bendinengxaki kwaye andazi ukuba ndingayibuyisela njani. Ndicela impendulo.
Ngaba inguqulelo esemthethweni okanye indlela yokukhuphela ayinakukhutshwa ngaphandle kweendawo ezingaphandle komdlalo kaGoogle?
Ewe, uGoogle uzakuyihlaziya ngokusesikweni kungekudala.
Nge-12/04/2013 ngo-00: 59, «Disqus» wabhala:
Molo uFrancisco, uyazi ukuba ndinetotshi eblackberry blackel 9800 kwaye andinakho ukukhuphela nantoni na kwi-app yegama! Yonke into ibonakala ngesiNgesi kwaye ndifuna ukukhuphela ivenkile yokudlala kwaye andinako, ndifuna ukwazi ukuba ungayenza njani! ivenkile yokudlala ndiyithandile ukuba isebenza njani kuba ndinokukhuphela ngeSpanish !!!
Ndiyifakile kwi-Xperia kwaye ngoku ayisasebenzi.Ukuba uyikhupha, ayibuyeli kuleya yangaphambili, andinayo ivenkile. Kuya kufuneka ndiyifomathe ifowuni ...
Marisela bael sitsho
Undinika phi ukhetho okanye ikhonkco lokukhuphela?
Phendula uMarisela Bael
UPaolo asukele grandez sitsho
kwaye iphi nceda
Phendula Paolo Chase Grandez
I-Ola ine-xperia s ics kwaye ndikhangela ibhokisi yemvelaphi engaziwayo ndiyivula ayindivumeli ndicinezele iqhosha lokufaka kuphela le inokucofa into enokuba yiyo?
Umntu weentyatyambo Delgado sitsho
Molo, ndinayo i-asus tf300t kwaye eyam ihlaziyiwe yodwa, kwaye ayibonisanga okanye ishiye irekhodi elifanayo nohlaziyo oluqhelekileyo kwaye ndenza ntoni ku-4.0.27, ndicinga i-27 ngokuba yithebhulethi ... enkosi ulwazi
Phendula uMntu uFlorido Delgado
Ikati ephambeneyo sitsho
NDIYAXELELWA UKUBA AKUKHO SICELO SINOKUQHUBA LOMSEBENZI, NCEDA UNCEDE ISIMBILE SAM SAMSUNG GALAXY S3
Phendula kwiCrazy Cat
Ndiyikhuphela phi, ukhetho lokukhuphela aluveli?
Ndifakelwe iVenkile yokudlala kodwa andikwazi ukufikelela kwizicelo kuba iphuma ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi kwaye ndinemidlalo efakiweyo kwaye ayisebenzi kuba ithi andinako ukufikelela kuGoogle, andina Ndiyazi ngokwenzekayo
Mhlobo ndinayo le ngxaki ndizama ukuvula ivenkile yam yokudlala kwiHuawei yam kwaye iyavula kwaye ayihlali umzuzwana kwaye ivale, ungandinceda?
apho ikhutshelwa khona
apho ikhutshelwa khona ndifuna ukuyikhuphela
Igama loqhagamshelwano Yoan sitsho
isebenza sansun gaaxy s3 clone
Phendula uYoan Guichon
Ndilukhuphela njani ivenkile yokudlala kwiselfowuni yam?
Ndiyikhuphela phi, ndicela undincede
Enkosi ngoncedo !! 🙂
UJeylin Zamora M sitsho
Andikhupheli kwivenkile yokudlala kwaye ndingena kwiselfowuni kwaye se.sale ngephanyazo
Phendula u-Jeylin Zamora M
K wave ukuba ndingavula ivenkile yesilivere
Ndingasilanda phi isicelo se-blackmart?
Umdyarho wenene 3 ufumana uhlaziyo lwawo lokuqala